Bit By Bit - Mass iskaashi - 5.5.5 U anshaxa
Waanada The in ay anshax khuseysaa cilmi ku tilmaamay in buuggan oo dhan. Waxa intaa dheer in arrimaha guud ee anshaxa-hadlay mashaariic iskaashi Cutubka 6-mass kicin qaar ka mid ah arrimaha anshax gaar ah, oo tan iyo iskaashiga mass waa sidaas oo cusub si cilmi bulsho, dhibaatooyinkan laga yaabaa in aan si buuxda muuqata marka hore.
In dhammaan mashaariicda iskaashiga mass, arrimaha magdhowga iyo credit waa kuwo adag. Tusaale ahaan, dadka qaarkood waxa ay ka fiirsan akhlaaq daro in kumanaan qof shaqeeyay sano on Prize Netflix iyo ugu dambeyntii heshay magdhow lahayn. Relatedly, dadka qaar waxay ka fiirsan akhlaaq daro inay bixiyaan shaqaalaha ee suuqyada shaqada micro-hawsha tiro aad u yar oo ah lacag. arrin A final of credit waa qoray waraaqaha. mashaariic kala duwan qaadan habab kala duwan, laakiin qaar ka mid ah mashaariicda siin credit qoray in dhammaan xubnaha iskaashi mass; tusaale ahaan, qoraaga final of warqad ugu horeysay Foldit ahaa "Ciyaartoyda Foldit" (Cooper et al. 2010) .
wicitaanada Open iyo qaybiyey xog ururinta ayaa sidoo kale kor u qaadi kartaa su'aalo adag oo ku saabsan ogolaanshaha iyo asturnaanta. Tusaale ahaan, Netflix sii daayay ratings macaamiisha movie in qof walba. Inkastoo ratings movie laga yaabaa in aan ka muuqan xasaasi ah, waxay muujin kartaa macluumaad ku saabsan macaamiisha la door siyaasadeed ama doorashada galmada, in macluumaadka macaamiisha isku mid ma ahayn in ay dadweynaha ka dhigi. Netflix isku dayeen in ay de-aqoonsado xogta si ratings ee aan loo qaadan Karin ku xiran kasta oo shakhsi gaar ah, laakiin isbuuc ka dib markii la sii daayo macluumaadka Netflix la qayb de-qarsoodiya by Narayanan and Shmatikov (2008) (eeg Cutubka 6). Dheeraad ah, in ururinta xogta qaybiyey, cilmi soo qaadi karaan xog ku saabsan dadkii aan ogolaansho. Tusaale ahaan, in Malawi joornaalada Mashaariicda ah, sheekaysiga ku saabsan mawduuc xasaasi ah (AIDS) ayaa soo guuriyeen oo aan ogolaansho ka mid ah ka qaybgalayaasha. None oo ka mid ah dhibaatooyinka anshaxa waa laga gudbi karin, laakiin waa in ay in la tixgeliyaa in wajiga design of mashruuc ah. Xusuusnow, aad "badnaa" wuxuu ka kooban yahay dadka.